Sida Loo | Laga Yaabaa 2022
Windows 10 Nooca 21H2 cusbooneysiinta cusbooneysiinta OS yar ayaa hadda diyaar ah
Microsoft waxay bilawday inay soo saarto Windows 10 Noofambar 2021 cusboonaysiinta kaas oo diiradda saaraya Horumarinta tayada. Halkan Sida loo soo dejiyo Windows 10 cusboonaysiinta nooca 21H2 hadda
3 Siyaabo kala duwan oo loogu sahlayo xisaabaadka maamulka Windows 10, 8.1 iyo 7
Koontada maamuluhu waxay kuu ogolaanaysaa inaad samayso isbedel saamayn doona isticmaalayaasha kale. Halkan waxaa ah 3 siyaabood oo kala duwan oo loogu suurtagelinayo xisaabaadka maamulka windows 10, 8.1 iyo 7.
Hagaaji Ilaalinta Ilaha Windows ma bilaabi kari weyday adeegga dayactirka gudaha Windows 10
Helitaanka Ilaalinta Ilaha Windows ma bilaabi kari weyday adeegga dayactirka, Inta ay socoto SFC Utility ? fur Services.msc oo bilow Adeegga rakibaha Module Windows
Hagaaji qaar ka mid ah Settings waxaa maamula Ururkaagu gudaha Windows 10
Waxaad hagaajin kartaa Qaar ka mid ah Settings ay maamulaan bug ururkaaga iyada oo loo marayo Windows Group Policy Editor ama Tweaking the Windows Registry Editor, Aynu aragno sida loo sameeyo.
Fix Aan awoodin in la rakibo Hawlgalka daabacaadda waa la dhammayn kari waayay
Helitaanka Cillad Rakibaadda Daabacaadda 0x000003eb Awood la'aanta in la rakibo Hawlgalka daabacaha waa la dhammayn kari waayay. Tirtir furayaasha daabacaha ee diiwaanka Windows dib u rakib prnter
Hagaajin Windows lama xiriiri karto aaladda ama kheyraadka (Seerarka DNS aasaasiga ah)
hagaajin Windows 10 Ma jiro galitaanka internet-ka, kuma xidhi karo server-ka DNS ama Windows lama xidhiidhi karo aaladda ama agabka (Server DNS Primary) Windows 10, 8.1 iyo 7
Com surrogate wuxuu joojiyay shaqadii uu ku shaqayn lahaa windows 10 (la xaliyay)
COM Surrogate waa habka martigeliyaha la fulin karo (dllhost.exe) kaas oo ka shaqeeya gadaasha marka aad dhex dhex socoto faylasha iyo faylalka. Habkan awgeed, waxaad awood u leedahay inaad aragto thumbnails. Dhibaatada COM Surrogate waxay u badan tahay inay sababtay codecs iyo qaybaha COM ee kale ee lagu rakibay software kala duwan
Ethernet ma laha qaabaynta IP sax ah (Shabakadda aan la aqoonsan) Windows 10
ma isticmaali karo intarneedka, Ethernet wuxuu leeyahay Shabakad Aan La aqoonsan Shabakaduna waxay ogaataa natiijooyinka Ethernet ma laha isku xidhka IP sax ah Aan xalino dhibaatada.
La xaliyay: NVIDIA Rakibadihii ku fashilmay Windows 10 nooca 21H2
Si loo hagaajiyo rakibaha NVIDIA arinku wuu fashilmay Windows 10 Abuurayaasha Cusbooneysii marka hore Dila Nidaamyada NVIDIA, Tirtir qaar ka mid ah faylalka la xiriira oo dib u rakib NVDIA Graphic Driver
Nidaamka iyo xusuusta cufan Isticmaalka diskka sare ee windows 10
Miyaad dareentay 100% Isticmaalka Disk Isticmaalka Sistamka iyo Xusuusta Dhibban taasna ay ugu wacan tahay Windows 10 Nidaamku wuxuu noqday mid aan jawaab lahayn? Si loo hagaajiyo nidaamka iyo isticmaalka xusuusta adag ee diskka sare, 100% isticmaalka CPU Tweak cabbirka faylka bogga ee dhammaan darawallada si toos ah, Disable System iyo Xusuusta ciriiriga ah ee jadwalka shaqada
Soo deji ugu dambeeyay Windows 10 Sawirka ISO adoo adeegsanaya aaladda abuurista warbaahinta
Raadinta Download Windows 10 faylasha sawirka diskka ISO? Halkan isku xirka tooska ah ee soo dejinta Windows 10 Sawirka ISO ugu dambeeyay ee tooska ah ee server-ka Microsoft.
La xaliyay: Microsoft Edge ma shaqaynayo ka dib windows 10 1903 update
Waa kuwan qaar ka mid ah xalalka caadiga ah ee dhibaatooyinka Microsoft Edge sida Microsoft Edge oo aan shaqaynayn ka dib windows updated, ama si kooban u furmo ka dibna xidho.
La xaliyay: Albaabka caadiga ah lagama heli karo Windows 10, 8.1 iyo 7
Helitaanka isku xirnaanta xaddidan, Ma jiro marin internet iyo socodsiinta natiijooyinka cilad bixiyaha Netwrk Adapter-ka Ma la heli karaa albaabka caadiga ah? Halkan sida loo hagaajiyo
Hagaaji APC_INDEX_MISMATCH Jooji code 0x0000001 gudaha Windows 10
Helitaanka APC_INDEX_MISMATCH Koodhka Joogsiga Shaashadda Buluugga ah 0x00000001. Tani waxay inta badan sabab u tahay Darawalka garaafiga ah ee aan ku haboonayn, Darawalka Bandhiga duugoobay ama kharribmay iwm.
Siyaabo kala duwan oo loo furo amar sare oo degdeg ah Windows 10
Command Prompt waa codsi turjubaan khadka taliska oo laga heli karo nidaamyada hawlgalka Windows, Halkan siyaabo kala duwan oo loo furo amar degdeg ah maamul ahaan
Sida loo dayactiro faylalka nidaamka xumaaday ee gudaha Windows 10, 8.1 iyo 7
Haddii aad la kulanto arrimo ku saabsan faylalka nidaamka Windows 10, socodsiinta nidaamka faylka hubinta utility Si toos ah ugu beddel hal faylka nidaamka Windows ee xumaaday nuqul wanaagsan oo la yaqaan oo ah faylka
La xaliyay: Server-ka DNS oo aan ka jawaabin Cilad ku jirta Windows 10
Adeegga DNS ee aan ka jawaabin dhibaatada waxay dhacdaa marka server-ka DNS ee tarjuma magaca domain uusan ka jawaabin sabab kasta. Hubi in adeegga macmiilka ee DNS uu socdo,
Hagaaji Isticmaalka CPU Sare, Disk iyo Xusuusta Gudaha Windows 10 21H2 cusboonaysiinta
Ma ku aragtay Disk CPU Sare iyo Isticmaalka xusuusta gudaha Windows 10? Nidaamka daaqadaha oo aan si hufan u shaqayn, Ku dheggan Aan ka jawaabin marka la furo faylal ama faylal iwm? Barnaamijyada Windows ama codsigu waxay qaataan waqti badan inay ka jawaabaan ama furaan? Waa kuwan qaar ka mid ah xalal awood leh oo lagu hagaajinayo Disk CPU Sare iyo Isticmaalka xusuusta gudaha Windows 10, 8.1 iyo 7
3 siyaabood oo aad ku gali karto Habka Badbaadada ah ee Windows 10 nooca 21H2
Habka Badbaadada ah wuxuu kuu oggolaanayaa inaad si fudud u aqoonsato oo aad u xalliso dhibaatooyinka kaa haysta Windows 10 aaladda iyada oo aan la helin caawimaad xirfad leh. Halkan sida loo bootiyo habka badbaadada leh